DEG DEG+DHAGEYSO: Xildhibaanadii Galmudug ee xilka ka qaaday M/weynaha Galmudug oo miyiga u firxanaya iyo xaalad adag oo ka taagan Cadaado. | PuntlandTimes-	Tuesday, February 21st, 2017	Home
DEG DEG+DHAGEYSO: Xildhibaanadii Galmudug ee xilka ka qaaday M/weynaha Galmudug oo miyiga u firxanaya iyo xaalad adag oo ka taagan Cadaado.
CADAADO(P-TIMES)- Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ee ay shalay 10 January 2017 sheegeen in ay mudanayaal baarlamaan kalsoonida kala noqdeen ayaa awood dheeraad ah siiyey ciidamada maamulkaas, si ay uga hortagaan burbur ku yimaada hanaanka maamulka Galmudug oo horey ay u dhistay dawladda faderaalka Soomaaliya.
Ciidamo badan ayaa ilaa xalay lagu soo daadiyey gudaha magaalada Cadaado, waxaana guryahooda la galay qaar kamid ah raggii wax ka abaabulay talaabadii shalay, kuwaas oo qaarkood laga waayay xaafaddahooda.
Warbaahinta Muqdisho, gaar ahaana Idaacadda DALSAN ayaa baahisey wareysiyada qaar kamid ah Xildhibaanadaas oo ka welwelsan noloshooda, ka dib markii ay go’aankaas qaaten.
Xildhibaanadan waxay ku sheegen Wareysiga in dhiigooda oo la baneysto ay u arkayaan talaabo halis galinaysa daganaanshaha Galmudug, iyagoo sheegay in ay xilkii ka qaadeen Madaxweynaha Galmudug si sharci ah.
Warar hoose ayaa u sheegay maanta 10 January 2017 in ay Xildhibaano gaaraya 30 ka firxadeen magaalada Cadaado oo ay kala aadeen deegaano kala gedisan oo kuyaala duleedyada Cadaado iyo magaalada Gaalkacyo.